Esikhathini iso unogwaja ukuthi zingavuvukalanga: izimbangela, izinqubo zokwelapha kanye nezici
Growing onogwaja - ukuzijabulisa, futhi indlela efanele ngokwanele inzuzo. "Eared" ibhizinisi kwenza kube nokwenzeka ukuze enze imali on ukudayiswa befuna isikhumba, zizalela impahla kanye isilwane izidumbu. Rabbit inyama iqukethe cishe awekho fat noma i-cholesterol, ubhekwa umkhiqizo imvelo nobungane wezokudla. ukusetshenziswa kwabo kusiza lulama ngemva ukulimala, ukuhlinza, izifo ezithathelwanayo.
Ikhaya esekhulile onogwaja linesizotha: akudingeki ikamelo wahlomisa ngokukhethekile, asidingi khulula ebanga; aklaba ukulungiselela inqubo ngabo konga isikhathi esiningi nomzamo omkhulu. izilwane ezifana Ukunakekela ilula futhi ngamandla ngisho imfundamakhwela umfuyi. Nokho, emkhakheni nemfuyo, kanye cishe yimuphi omunye, akuyona into izingibe: isilwane eared kungenzeka sigule sibangwe. Kuthiwani uma Unogwaja Puffy Eyes? Indlela esiphatha ngayo?
Lesi sifo ezivamile livezwa ububomvu, ukuvuvukala, edema samehlo, conjunctivitis luyaphi amafomu lwamafinyila kanye ubomvu. Kungani amehlo evuvukele onogwaja? Ukuvuvukala izinhlaka umbono kungenxa ukucasuka amakhemikhali, le ingress izinhlayiya ezincane okuphakelayo, isihlabathi, uthuli, noma ngenxa yokuntuleka Vitamin A.
Uma iso unogwaja zingavuvukalanga - ke kungenziwa bazitshela ukutheleleka mucosal (catarrhal) conjunctivitis, izimpawu zazo yilezi:
isigamu-oseduze noma ukuvala umqhewu iso,
ububomvu kanye conjunctival ukuvuvukala - okusobala mucosa, ikhava elingaphandle yeso,
Izimpawu ifomu ubovu lesi sifo:
ukuvuvukala kabi conjunctiva,
ubomvu kusuka kwangaphakathi iso ekhoneni,
Ubuhlobo obuseduze khulu leminyaka,
ngezilonda ale nkinga,
izilonda nokuguguleka kwenhlabathi at emaphethelweni Isivalo.
Indlela esiphatha ngayo conjunctivitis onogwaja?
Uma iso unogwaja kwaba avuvukile, nazo zonke izibonakaliso conjunctivitis, ukwelashwa kufanele kwenziwe ngezigaba eziningana:
isixazululo eyewash furatsilina lokuhlala aphansi (1: 5000);
zinc lehla instillation (2-3 amathonsi), noma 0.5% resorcinol;
esesula 3% isixazululo boric acid nge swab ukotini - lokhu kususa ubomvu kanye soma kwakhiwa;
laying Isivalo ngaphansi yodoformennoy boric noma okugcoba;
seeding ingxube we ulceration okuholela powder futhi lukashukela e alinganayo ngezabelo calomel.
Ngezinye ukwelashwa kwesikhathi izinqubo isifo kuyo yonke indikimba idwetshwa: Isilwane evusa lokushisa, babe nobunzima ukunyakaza ukubambisana, avele ngezwi. Ngenxa yalokho, onogwaja thathaza phumputheka, unciphise umzimba futhi bafe.
Kukholakala ukuthi kungenzeka conjunctivitis unogwaja ziphathwe imithi efanayo njengomuntu, kodwa babonisana wezilwane kusadingeka. Njengoba zokuvimbela Kunconywa ukugcina ezinkanjini ehlanzekile imishini, ukuze afeze magciwane gqwa. Ukudla okunomsoco edingekayo ukufaka ukudla nge carotene okuqukethwe: Kale, izaqathe kanye eziqongweni green, utshani obomisiwe, pulses ekuqaleni yokukhula.
Myxomatosis: kubangela ukutheleleka
Uma unogwaja zingavuvukalanga amehlo kanye nekhala, sikwazi ukukhuluma myxomatosis - esithathelwanayo, ukugula acute okwenzeka ukuthi ine uhlamvu ubhubhane futhi adluliselwa ngezindlela eziningana, okungukuthi ngokusebenzisa:
omiyane abathwele igciwane nezindlala salivary (namazeze, omiyane, amakhizane);
amathuluzi handyman, abaphuza, esebenza ngogesi - okuwukuthi, kusetshenziswa nsuku zonke.
Izimpawu ifomu oedematous
ifomu Edematous is myxomatosis ezingelapheki libhekene Ukuthuthukiswa okusheshayo (kusuka 2 kuya 7 izinsuku) kanye nezinga eliphezulu lokufa. Uma unogwaja amehlo zingavuvukalanga kanye nekhala, kuthathwa leli fomu lesi sifo, nayo ephelezelwa:
ububomvu iso yokuguga, ekugcineni esakha ibe conjunctivitis ne kumiswa soma,
isimo evuvukele acinene ephelezelwa ubovu uquqaba,
ecinene, ngokuvamile kwesifuba,
ukuvuvukala Izitho zangasese zangaphandle,
imfundo wonke umzimba Izigaxa ezinkulu ezigcwele ketshezi.
Ngaphandle kweqiniso lokuthi kwabathile unogwaja kwaba iso avuvukele kukhona ukucindezelwa jikelele isilwane, amehlo zomile, izindlebe sawo. Pet eyeka ukudla. Die esikhathini esingaphansi kwesonto.
Uma unogwaja amehlo evuvukele nezindlebe, lokho ngokuqinisekile kufakazela ukungcoliswa myxomatosis. Indlela ukwelapha ke? Ukwelashwa amafomu edematous of myxomatosis ngokuvamile kukhona lutho: izilwane ezigulayo kumele lingaxhumani lomhlambi wezinkomo ukugwema ukungcoliswa nezinye onogwaja. Isifo siqhubeka ezimatasa esikhathini ehlobo-ekwindla, ngakho kudingeka bahlale kuqashwe impilo ezifuywayo: mhlawumbe onogwaja obomvu amehlo Puffy, nezinkophe avuvukele ukubukeka evilaphayo kanye ogulayo.
Izici myxomatosis ifomu nodular
Myxomatosis ngefomu nodular akuyona ingozi futhi elinesimo zavela kancane kancane imicimbi: unogwaja akafi ngaso leso sikhathi, anamandla ngokugcwele, ngokuvamile azizwa. Ukuba khona isifo kungabonakala Izigaxana ezincane, avame ukuvela ekhanda laso silwane, amehlo nezindlebe. Esigabeni esilandelayo lesi sifo sihlasela izinhlaka umbono: amehlo onogwaja zingavuvukalanga. Okufanele ukwenze uma izimpawu eziyingozi? Kuka ukwelapha imfuyo?
Sicela uqaphele ukuthi ifomu nodular of myxomatosis libhekene ukuvela amakhala yisisu futhi kwesifuba. Izigaxana inyuka, inhloko embozwe izindawo evuvukele. Inkinga isifo siyenzeka emva kwezinsuku 9-11. Ngaphezu kwalokho, zonke izimpawu yefomu okukhulu myxomatosis: ukungakuthandi ukudla, kwesifuba, neziqu eziningi okulimaza isilwane kuzo zonke ukuqashelwa, kwezinye izimo, ukuthuthukiswa i-pneumonia. Ngokungafani ifomu nodular lesi sifo acute kuyinto attenuation yayo kancane kancane 30-40 ngosuku. Uma isilwane kwaba okukhuthazela ngokwanele, uyalulama. Izinga sokusinda 50%. Kunoma ikuphi, isilwane emele ingozi ngoba abazalwane, kufanele luphathwe antibiotic antiseptics Ingaphandle. Ngempela kudingeka ukuba zibulale rabbitries udoti bangcwabe ezijulile, abanye ukwethula umgomo onogwaja.
Emehlweni unogwaja babe evuvukele. Indlela esiphatha ngayo? ukwelashwa myxomatosis siyasebenza ngesikhathi izigaba zokuqala, futhi imijovo ongama nsuku zonke "Gamavita" 2 ml bese 1 ml "Fosprenil 'kuze alulame ngokugcwele. Futhi phakathi kwesonto, izikhathi 2 ngosuku kufanele inikwe i izidakamizwa isilwane "Baytril" (ahlanzekile) ngesilinganiso 1 ml ngalinye bodyweight 10 kg. Bury iso amaconsi, leli nxeba welapha isixazululo utshwala iodine. Ukuze ukuvimbela ukutheleleka abantu enempilo belashwa onogwaja kumele igcinwe ngokuhlukaniswa ngezinyanga 2-3.
Ukuvimbela ukutheleleka myxomatosis izinyathelo kuphela, okungukuthi ungunkulunkulu lokugoma yiyo yonke imfuyo e zisencane kakhulu. Labetibambile kabili: eneminyaka engu kwezinsuku 28-45 eziphindaphindiwe njalo ezinyangeni 3. Isikali - 1 ml phansi kwesikhumba izidakamizwa. Kumiswa amasosha omzimba ukuba myxomatosis kwenzeka ngosuku lwesikhombisa emva umjovo futhi kuthathe izinyanga 8-9. Ukugonywa ngokumelene myxomatosis kwenziwa minyaka yonke ngo-March. Ngenxa khulula izinyathelo sanitary kufanele ugweme ukuxhumana nabanye abantu nezilwane abantu abangakwazi ukwenza njenge zithwala of myxomatosis. Amaseli kanye endaweni ezungeze kubo okufanele kuhlale kuhlanzekile kugcinelwe, kanye nezilwane ukuhlinzeka ukudla amanzi okuphuza kanye nekhwalithi ahlanzekile.
Pasteurellosis: incazelo, izimpawu
Kungani amehlo evuvukele onogwaja? Lokhu uphawu zingase zibe Indlela ukutheleleka pasteurellosis - isifo esithathelanayo, okungukufa causative ejenti coli Pasteurella, kuthiwa ukuba isebenze le mucosa we elingenhla pheshana zokuphefumula. Ukubonakaliswa izimpawu zokuqala simnene futhi waphawula ngemva kokuzibeka elangeni 5-10 amahora.
Ngendlela okukhulu sifo livezwa ukwanda elibukhali lokushisa, erythema mucosal, edema okunzima elingenhla ipheshana zokuphefumula. Izilwane ezigulayo zinezikhathi umbono ecindezelekile, ukuntula isifiso sokudla. umphumela Lethal kwenzeka ngosuku lwesibili emva kokutheleleka.
Ezingamahlalakhona ifomu sifo zanqwabelana ipheshana wokugaya ukudla bese ukuphefumula apharathasi, uboniswa uketshezi ubovu kusukela ingaphakathi acinene nohudo. I isilwane sifa esikhathini esingaphansi kwesonto.
Izimbangela ukutheleleka pasteurellosis
Uma iso unogwaja ukuthi zingavuvukalanga, okungase kube isizathu lesi simanga? Izizathu kukhona pasteurellosis esiphelweni itheleleke amanzi isilwane ukuphuza, okuphakelayo equkethe nezilwanyana ezincane pathogenic. Ukuze ekwelapheni isifo usebenzisa imithi elwa namagciwane (IM) kanye sulfa izidakamizwa, "Norsulfazol", "tetracycline", "biomitsin", "Levomitsin", "Oxytetracycline." Ukwelashwa amafomu njalo lesi sifo ezinsukwini 3 wokuqala owaqhutshelwa izidakamizwa sulfanilamidnymi, kulandela izinsuku 3 kufanele kwabathinta imithi elwa namagciwane esicutshini ke futhi ukuze uqhubeke nokwelashwa sulfanilamidnymi izidakamizwa. Ubude obuphelele lokhu kwelashwa kwezinsuku 9-10.
Ukuze ugweme ukungcoliswa ezifuywayo pasteurellosis wasebenzisa umuthi wokugoma ekstraktformolovaya ofanele esemncane lezinyanga 1.5 nangaphezulu. onogwaja Omncane injected zonke izinsuku ezingu-7 serum ekhethekile nganoma 4 ml ngayinye 1 kg esisindo.
Malokklyuziya: incazelo isifo
Ngo onogwaja, amehlo abomvu Puffy kungabonakala nasemkhakheni at malokklyuzii - isifo namazinyo likhule kahle, ogama izimpande nibeka njalo ingcindezi zamehlo. Ngokuvamile ingcindezi yakhe sinamandla kakhulu kangangokuba amehlo akhe kwabonakala ukuba iwe ezikhoxeni zawo. Ngezinye izigaba eziphambili lesi sifo okuwukuphela kwendlela kuphela ukunqunywa isitho mbono.
Indlela ageze ikati? Indlela ageze ikati, okuyinto awusoze wangigeza?
Indlela ukuqeqesha rat: isiqondiso nezibonelo
Inja ukuzalela Norwegian Elkhound: uhlamvu, amandla, umbala kanye abalimi Izibuyekezo
Bichon Frize, noma lapdog French
Bangaki yegolide bukhoma e aquarium?
Indlela yokutshala rose ngakwesokudla entwasahlobo?
Imiphakathi eNdiya Lasendulo
Naydzhel De Jong: izinto ezithakazelisayo kakhulu mayelana footballer Dutch ezimibalabala
Shantanu izaqathi. Incazelo ezihlukahlukene. izaqathe Ukhula Othandweni ikhaya
Zagorski isitshalo optical-mechanical: umlando, incazelo, ukubuyekezwa
Umsizi UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki: iqoqo for nokulungisa imiqulu "uMidori"
Ukuqhathanisa balance sheet izinto evamile ifomu lula